Faalo:Dhawaaqii Rasaasta Dhawaq baa Badalay! Qormo Xiise Gaar ah Leh oo Muqdisho ku Saabsan!
Home Diaspora Faalo:Dhawaaqii Rasaasta Dhawaq baa Badalay! Qormo Xiise Gaar ah Leh oo Muqdisho...
Xilligaas markii uu qofku doonayo in uu baxo guriga uu ku nool yahay, ama hoteelka uu degan yahay waxaa caado aheyd in aan irridda la furi illaa la hubiyo dadka banaanka jooga iyo waxa ay yihiin. Haddii qof aan la garaneyn uu ku jiro dadka banaanka jooga ma sahlanayn in la baxo.
Weliba haddii bac, daasad ama kartoon aan meesha horey u oolin lagu arko taxadar gaar ah ayaa loo yeelanayey si loo hubiyo in ay ku jiraan wax qarxi kara oo la soo diyaariyey.
USA: Maxkamad xukun ku riday Somali-Swedish taageertay Alshabaab.